अमेरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामाले चीनमा पाए जागिर !::mirmireonline.com
अमेरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामाले चीनमा पाए जागिर !
एजेन्सी कार्तिक २८ । अमेरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अब जनवरीबाट ८ वर्ष लामो शासनको बागडोर छाडेर बिदा हुदैछन् । त्यस पछि उनले के गर्छन् त भन्ने प्रसंगसगँ जोडेर अहिले एउटा भिडियो चीनीया सामाजिक सञ्जालमा भाईरल बनेको छ । जसमा बराक ओबामाले चीनको एक मोटर कम्पनीमा जागिर पाएको भन्ने छ ।
तर त्यो भीडियो खास अमेरीकी राष्ट्रपति ओबामा भन्दा चीनका एक जना ओबामा जस्तै अनुहार भएका व्यक्तिको हो । ३० वर्षका सिगुओ भनिने ती युवाले ओबामासगँ अनुहार मिल्ने भएका कारण उनको नक्कल गर्दै आएका छन् ।
त्यस भिडियो अनुसार अमेरीकी राष्ट्रपति ओबामाले कार्यलय छाडेका हुन्छन् । उनी एक होटलमा चीनीया अखबार पढ्दै गरेका हुन्छन् । सो अखबारको पहिलो पन्नामा ओबामाले कार्यलय औपचारीक रुपमा छाड दिए भनेर लेखिएको छ ।
यही बेला ओबामालाई अग्रेजीमा एउटा टेक्सट म्यासेज आउछ , जसमा लेखिएको छ , तपाईको लागि एउटा मिसन छ । जुन कारबाट संघाईबाट अत्जुसम्म गए पछि एएटा कार रेंटल कम्पनी आउछ । त्यसमा एएटा रेन्टल फर्म भरे पछि उनी सडकमा आउछन् । जनताले देखेर हैरान भएर ओबामा , ओबामा को नारा लगाउने छन् । यसरी जम्मा एक मिनटमा यो भिडियो सकिन्छ ।
यी नक्कली ओबामा को हुन् त?
उनको बारेमा आधिकारीक सार्वजनिक नभए पनि उनी शियाओ जुगुओ भएको दावी अन्य नागरिकले गर्दछन् । ३० वर्षका यी युवाले ओबामाको नक्कल गरेर पहिचान बनाएका छन् । यो भिडियोमा उनको अनुहार ठ्याक्कै ओबामाको जस्तो देखिन्छ ।
उनले ओबामाको ठ्याक्कै मिल्दो जुल्दो अभिनय गरे पछि धेरै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता हैरान भए कि यो साच्चै पो हो कि क्या हो ? भनेर तर अन्ततः ती नक्कली ओबामा नै हुन् । यसलाई चीनीया युवाहरुर्ले एका तर्फ ओबामाको व्यंग्य अर्कोतर्फ उनको नीतिको विरोध जस्तो रुपमा अपनाएका छन् ।
अन्य अनौठो संसार समाचार
एआर १० सेमि अटोमेटिक राईफर भिरेर दीक्षांत समारोहमा गएपछि……
यी हुन् पेट नभएकी युवती, जो हरूका लागि खाना बनाउछिन्ः पढ्नुहोस होस उडाउने पुरा कहानी
हात, खुट्टा दुबै चल्दैनन्, तर यसरी स्कुटर कुदाउँछन्, ब्यासकुमार (भिडियोसहित)
छोराले आमालाई बलात्कार गरेको बुहारीले देखेपछि छोरा पक्राउ, आमाकाे बयान सुनेर प्रहरी नै छक्क
चलिरहेको कारमा सिटबेल्ट खोलेर सेल्फि खिच्दा १६ बर्षे किशोरीको ज्यान गयो
यी हुन् चम्ल्याहा सन्तानकि आमा
साझा पत्नीत्व व्यवस्था नै पुँजीवादी व्यवस्था हो ?
परिवारको उन्मूलन, कम्युनिष्टहरूको यो कलङ्कपूर्ण विचारदेखि उग्रवादीहरू समेत भड्किन्छन् । आधुनिक पूँजीवादी परिवार कुन
तस्विरमा यस्तो देखियो अखिल (क्रान्तिकारी)ले निकालेको र्याली
काठमाण्डौ, १ जेठ । ५४औं विद्यार्थी दिवसको अवसरमा अखिल नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्रिय विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी)ले
मार्क्सले सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणका लागि ‘गोथा कार्यक्रम’ विरूद्ध लडेको यस्तो छ संघर्षको इतिहास
(मार्क्सको ‘गोथा कार्यक्रमको आलोचना’ कुन सन्दर्भमा र किन लेखिएको थियो भन्ने कुरा मार्क्सवादको अध्ययन
मुक्तिनाथमा मोदीले यसरी गरे पूजा (भिडियोसहित)
मुस्ताङ, २९ वैशाख । नेपालको दुईदिने राजकीय भ्रमणमा आउनुभएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज बिहान